Mac App Store မှ cache ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းမည်နည်း ငါက Mac ပါ
Mac App Store မှ cache ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ
Ignatius ခန်းမ | | Mac က App Store ကို, လဲ tutorial
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac App Store မှအမြဲတမ်း application တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုသောသုံးစွဲသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာသိသည့် application အမြောက်အမြားစတင်လာဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive ကိုအသုံးပြုခြင်း။ Mac App Store ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသောအခါ၊ OS X သည် cache ကိုအသုံးပြုသည် ရလဒ်များကိုစာမျက်နှာများပိုမိုမြန်ဆန်စွာ load လုပ်နိုင်ရန်ပုံရိပ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်.
ဒါပေမယ့်ဒီ cache ထဲမှာလည်းငါတို့စတင် download လုပ်သောအခြား application အချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာဘာအကြောင်းပြချက်မှဒေါင်းလုပ်မရ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤ cache သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစာမူတွင်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖျက်ခြင်းနှင့်အချို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အတူပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းအပြင်၎င်းကိုမည်သို့ရှင်းလင်းနိုင်မည်၊ သူတို့ကို Mac App Store မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လမ်းမရှိသောအခါ.
Mac App Store မှ cache ကိုရှင်းပါ
စတင်နိုင်ရန် Mac App Store ကိုပိတ်ပြီး Terminal application သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့ရေးမည့်နေရာကိုသွားပါ။
$ TMPDIR ကိုဖွင့်ပါ။ / C / com.apple.appstore /
ပြီးရင် com.apple.appstore ဖိုင်တွဲပွင့်လာလိမ့်မယ်။ အခု ဤဖိုင်တွဲ၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုအမှိုက်ပုံးထဲသို့ငါတို့ရွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကော်ပီကူးလိုပါကအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ပေါ်ရှိဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
ဤဖိုလ်ဒါရှိအရာအားလုံးကိုဖျက်ပြီးသို့မဟုတ်ရွှေ့လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ င်းဒိုးကိုပိတ်ပြီး Mac App Store ကိုပြန်ဖွင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်၍ မရသော application တစ်ခုနှင့်ပြcorrectlyနာတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာ load မလုပ်သောစာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ကဏ္sectionsများရှိခဲ့လျှင် အခုအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွားရမယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac App Store မှ cache ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ
Wasteland 2: ဒါရိုက်တာ၏ဖြတ်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ရောင်း
လုံးဝအခမဲ့ applications များအစုအဝေးကို